"Yandex" मा Retargeting: यो के हो र कसरी उसलाई काम गर्न? यी प्रश्नहरूको चासो जवान व्यवसायीक र उद्यमीहरू। अनलाइन स्टोर को कुनै पनि मालिक आगंतुकों थप वृद्धि बिक्री र बढ्दै रूपान्तरण भयो चाहन्छ। यो यस्तो उद्देश्य र सिर्जना retargeting लागि हो।
"Retargeting" सरल शब्दहरू अवधारणा
कम्पनी वेबसाइटमा प्रचार लागि लोकप्रिय उपकरण - यो प्रासंगिक विज्ञापन हो। प्रयोगकर्ता एउटा सानो सन्देश चासो र खोज प्रश्नहरु को आधारमा देखिने हेर्नुहोस्। सायद ग्राहक unobtrusively कम्पनी, उत्पादन वा उत्पादनको बारेमा जानकारी पाउँछ।
सामग्री देखि लिंक निम्न, प्रयोगकर्ता पहिलो पटक साइटमा लिएको छ र प्राप्त यसका सामग्रीहरू थाह। तस्वीर हेर्नुहोस्, निर्णय गर्ने अधिकार जानकारी खोज्दै पढ्न पाठ। आदर्श, विकल्प ग्राहक तुरुन्तै बनाउँछ, तर प्रायजसो साइट छोडेर।
यस कम्पनीको मिशन - निर्णय गर्न प्रयोगकर्ता फर्काउने। यो बिन्दु मा, काम retargeting "Yandex" मा समावेश गरिएको छ। यो प्रविधि सम्भव फिर्ती बनाउँछ संभावित ग्राहकहरु फिर्ता साइटमा। हाल यो "दर्शक चयन अवस्था।" भनिन्छ
Retargeting पहिले साइट भ्रमण र त्यहाँ कुनै पनि कार्य प्रदर्शन गर्ने प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्पादन, सेवा, वा लिंक बढावा:
1 मिनेट भन्दा लामो पृष्ठमा रहन;
आफ्नो किनमेल गाडी वस्तुहरू थप्न, तर आदेश छैन;
हामी हेर्नुभयो, तर किन्न गरेनन्;
मुख्य कार्य - विज्ञापन को प्रभावकारिता वृद्धि गर्न। संग उचित सेटअप रूपान्तरण नै प्रयोगकर्ता दोस्रो र अन्य समयमा साइट भ्रमण बाट 35% वृद्धि।
retargeting को सिद्धान्त सामना तपाईं सामना गर्दै हुनुहुन्छ कुरा बुझ्न लगातार आवश्यक छ, र यो लागू गर्न कसरी सर्वश्रेष्ठ। प्रचार उपकरण को सेट अप त्यसपछि परिणाम हुनेछ, बुझे गर्न।
"Yandex" मा Retargeting: उदाहरणहरू
सही साइट गाह्रो फिर्ता संभावित ग्राहक फर्कनुहोस्। इन्टरनेट प्रत्येक अन्य स्रोतहरू समान भरिएको छ, र एक अद्वितीय प्रस्ताव थप र गाह्रो बनाउन।
Retargeting को Yandex विज्ञापन नेटवर्क (यान) मा एक साइट को अस्तित्व को प्रयोगकर्ता सम्झना दिलाउँछ। प्रणाली यान वेबसाइटहरू, मोबाइल र स्मार्ट टिभी-आवेदन मा साइटहरु दसौं हजार समावेश। सेटिङ आधारमा, तपाईं न्यूनतम लागत संग प्रति दिन लक्षित दर्शक हिट हजारौं प्राप्त गर्न सक्छन्।
retargeting को योजना तीन मुख्य चरणमा हुन्छन्:
एक आगन्तुक आफ्नो साइटमा आउँछ र केही कार्य र पात कार्य गर्दछ।
उहाँले नियमित कि साइट मा यान-सम्बन्धित गतिविधिहरु मा प्रासंगिक विज्ञापन देख्नुहुन्छ।
यसलाई फिर्ता साइटमा आउँछ र विकल्प बनाउँछ।
जाँच व्यवहार मा योजना सजिलो छ:
को "Yandex" ओछ्यान तन्ना को इन्टरनेट-दोकान पाउन।
प्रासंगिक विज्ञापन छ कि स्रोत चयन गर्नुहोस्।
एक टोकरी यी मध्ये एक थप्न, थप उत्पादनहरु ब्राउज गर्नुहोस् र साइट छोड्नुहोस्।
केही समय पछि, यो उत्पादन भन्दा अन्य स्रोतहरू, सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल खेल मा विज्ञापन मा उपस्थित हुनेछ। यदि यो हुन्छ, त्यसपछि राम्रो retargeting "Yandex" मा जो को प्रभावकारिता स्पष्ट छ रूपबाट।
यो प्रविधि तपाईं अनुमति दिन्छ गर्न "पीछा" एक संभावित ग्राहक प्रासंगिक उहाँले अन्य साइटहरु दौरा वा खोज इन्जिन प्रयोग सम्म विज्ञापन।
retargeting कस्तो प्रकार, त्यहाँ
त्यहाँ काम को सिद्धान्त मा retargeting दुई प्रकार छन्:
साइटमा प्रयोगकर्ता गतिविधिहरु को एक अध्ययन आधारमा। को आगन्तुक समर्थन प्रश्न, आधार कुनै पनि मा सामान वा सेवा, ब्राउज निर्देशिका, फिल्टर पडताल। वस्तुहरूको एक मा उहाँले अन्य भन्दा अब रहन सक्छ, वा आफ्नो गाडी थप्न। तर, खरिद, उहाँले प्रतिबद्ध र अनलाइन स्टोर छोड्दा छैन।
कारण धेरै हुन सक्छन्: कसैले इन्टरनेट गुमाए, विचलित छ, अर्को व्यक्ति को सल्लाह गर्नुपर्छ तर एक को परिणाम - आदेश जारी गरिएको छैन।
मा व्यवहार retargeting सेटिङ "Yandex", कार्यहरू प्रयोगकर्ता द्वारा प्रदर्शन गर्दै छन् के को आधारमा बनेको छ जो को, सबै साइटहरु यान साइट को अस्तित्व सदृश शुरू हुन्छ।
त्यहाँ एक कम मूल्य मा उत्पादन वा साथीहरूको साथ हेरिएको प्रासंगिक विज्ञापन हुन्। प्रचार यस उत्पादन वा निःशुल्क सेवा खरीद संग मा प्रस्ताव राखे।
साइटमा प्रयोगकर्ता फिर्ता र खरिद प्रोत्साहन - व्यवहार retargeting को मुख्य लक्ष्य।
यसको कार्य इन्जिन खोजी गर्न खाता प्रयोगकर्ता अनुरोध मा लिन्छ। एक व्यक्ति, चयन गरिएको विज्ञापनको लागि देख छ भन्ने तथ्यलाई आधारमा। यी प्रस्ताव साथै अन्य साइटहरु र प्लेटफर्ममा, खोज इन्जिन पृष्ठ देखा।
हामी "Yandex" मा खोजी retargeting विचार गर्नुहोस्। यो के हो तपाईं खोज टाइप 1-2 पटक, "बिस्तर" द्वारा जाँच गर्न सक्छन्। धेरै साइटहरु समीक्षा पछि, केही समय देखिने जताततै यी विज्ञापन:
किन्न 25% छुट संग ओछ्यान तन्ना साटन;
ओछ्यान तन्ना (इभ्यानोभो) एक उचित मूल्य मा;
यहाँ उद्देश्य साइटमा प्रयोगकर्ता आकर्षित र ब्रान्ड संग सम्पर्क वृद्धि गर्न छ। यो पसलमा र संभावना ग्राहक लोयल्टी को जागरूकता बढ्छ।
retargeting को लाभ
retargeting को मुख्य लाभ विशेषज्ञ प्रयोगकर्ता द्वारा प्रदर्शन प्रेरित आधारमा विज्ञापन को प्रदर्शन अप सेट छ। विशिष्ट उदाहरण संग राम्रो यो मुद्दा सामना।
औसत साइट (1-2 आगन्तुक पृष्ठ खोल्न र एक समय को लागि तिनीहरूले छन्) भ्रमण। यो embodiment मा, "Yandex" मा retargeting बारेमा विचार गर्नुपर्छ: कसरी ग्राहकहरु फर्केर पसलमा प्रस्ताव बारेमा थप जान्न भनेर यसलाई सेट गर्ने? सबै ध्यान साइटमा मुख्य पृष्ठ वा निर्देशिका खोल्न प्रयोगकर्ता दिइएको छ
विशिष्ट सामान वा सेवाहरूको खण्डहरू ब्राउज गर्नुहोस्। मानिस उत्पादन अध्ययन, तर आदेश छैन र बायाँ। सामान्यतया, यो अवस्थामा ग्राहकहरु विभिन्न पसलहरूमा देखि प्रस्ताव अध्ययन जहाँ हुन्छ। यस मामला मा, retargeting साझेदारी, छूट, उपहार वा बोनस को माध्यम द्वारा इच्छित उत्पादन खरीदारों को ध्यान आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ।
उत्पादन टोकरी थपियो, तर त्यहाँ कुनै आदेश छ। चुनौती खरीद पृष्ठमा आगन्तुक फिर्ता ल्याउन छ। इन्कार गर्न गाह्रो छ कि एक अद्वितीय प्रस्ताव मदत गर्न आदेश राजी।
सामान खरिद वा सेवा आदेश दिए। प्रदर्शित ग्राहक लोयल्टी राख्न सेट गर्न कसरी - यो चरण, "Yandex" एउटा retargeting रूपमा एक उपकरण जस्तै को कार्य मा? संग प्रासंगिक विज्ञापन समय समयमा आफ्नो स्टोर को सम्झना हुन सक्छ, बिक्री बताउन र सामान्य खरीदार स्थिर बनाउन।
Retargeting खरिद गर्न पूर्व माल लागि खोज देखि, सबै चरणमा मा आगंतुकों र सम्भावित ग्राहकहरु प्रोत्साहित गर्छ।
नयाँ सम्पर्क आकर्षित;
परिवर्तन "चिसो" ग्राहकहरु "न्यानो";
स्रोत वफादार सुनिश्चित गर्नुहोस्।
"Yandex" मा Retargeting: प्रकार र मिलाउने सुझाव
यसलाई पहिले नै भएको छ retargeting दुई प्रकार वर्णन गरिएको: व्यवहार र खोजी। पनि दर्शक द्वारा भेद:
फरक विज्ञापन देखाइने गर्ने वास्तवमा निहित। तिनीहरूलाई प्रत्येक परिणाम निर्भर जो केही कन्फिगरेसन आवश्यक छ। तर प्रिपेरेटरी चरण, दुवै अवस्थामा नै मा, अन्य कार्यहरू बिना गर्न सकिन्छ।
कन्फिगर गर्न तयार
काम "Yandex" मा खाता को दर्ता सुरु। एक पटक मेलबक्स प्रकट हुनेछ, र अन्य सबै सेवाहरू स्वतः उपलब्ध हुनेछ।
"Yandex.Mail" को लागि साइन अप।
"Yandeks.Metrika" एउटा काउन्टर सिर्जना गर्नुहोस्।
प्रति "मेट्रिक्स" समायोजन गर्नुहोस्।
बन्द अघि वेबसाइटमा ठाँउ
retargeting स्थापना जानुहोस्।
"Yandeks.Direkte" तुरुन्तै वा लक्ष्य वा खण्डहरूमा सेट पछि हुन सक्छ एउटा अभियान सिर्जना गर्नुहोस्।
Retargeting लक्ष्य - सेट लक्ष्य
retargeting जसको सेटिङ लक्ष्य को विकल्प मा आधारित छ "Yandex", भरोसा।
लक्ष्य इच्छित परिणाम निम्त्याउँछ जुन स्रोत, एक प्रयोगकर्ता कार्य हो। "Yandeks.Metrika" तपाईं उद्देश्य4प्रकार परिभाषित गर्न अनुमति दिन्छ:
पृष्ठ एक यात्रा।
यो समग्र लक्ष्य।
यो आगंतुकों "prosecuted" गरिनेछ जो लक्ष्य, परिभाषित गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। विभिन्न मापदण्डहरु स्रोत प्रत्येक प्रकार को लागि सेट छन्।
!!! परिषद। अनलाइन स्टोर लागि कम्तिमा तीन उद्देश्यका प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ:
वस्तु गाडी थपियो, आदेश जारी गरिएको छैन, बायाँ;
ग्राहक एक टोकरी दौरा, तर अर्डर गरे छैन;
चेकआउट प्रक्रिया सुरु, तर सिद्ध गर्न असफल भयो, म साइट बाँकी छ।
उदाहरणका लागि, "दृश्य" को लक्ष्य कसरी स्थापित गर्न सिक्न:
को "Yandeks.Metriku" जाने;
मा "सेटिङ" मा क्लिक को ठाडो मेनु बाँया मा;
मा मेनु पट्टी सही मा, "उद्देश्य" चयन;
एउटा अनुकूल नाम (पृष्ठ को भ्रमणमा) दिन;
"दृश्य" सेट (3 - यो retargeting विज्ञापन साइट को3पृष्ठ को एक न्यूनतम हेरिएको सबै पर्यटकहरूलाई देखाइने अर्थ);
त्यसै गरी, तपाईं अवस्था एक किसिम को लागि कुनै पनि लक्ष्य सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
खण्ड retargeting - खण्डहरूमा सिर्जना
विज्ञापन देखाएर लागि दर्शक को विशिष्ट खण्ड को "Yandex" मा retargeting प्रतिक्रिया। को खण्ड कसरी कन्फिगर गर्न - एउटा सानो पुस्तिका प्रोम्प्ट गर्नेछौं:
Yandeks.Metrike मा रिपोर्ट मा जानुहोस्।
"मेरो रिपोर्टहरू" चयन गर्नुहोस्।
"नयाँ रिपोर्ट" क्लिक गर्नुहोस्।
शीर्ष प्यानल मा, रिपोर्ट को अवधि (पूर्वनिर्धारित अन्तिम महिना) निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
यसलाई + ".... दौरा जो" अवस्था सेट
अवस्था "व्यवहार" चयन गर्नुहोस्।
"समय साइट मा" को श्रेणी सेट गर्नुहोस्।
निर्दिष्ट "45 सेकेन्ड को लागि।"
रिपोर्ट बचत गर्नुहोस्।
यसरी 45 सेकेन्ड भन्दा लामो साइटमा थिए पर्यटकहरू खण्ड कन्फिगर। तिनीहरूले यो दर्शक लागि सिर्जना गरिएका विज्ञापन देखाउने छौँ।
खण्ड आगंतुकों जस्तै विभिन्न विशेषताहरु, मा हुन सक्छ:
समय साइटमा खर्च र यति मा। डी।
तिनीहरूले आफ्नो आफ्नै हुन वा "Yandeks.Metrikoy" प्रस्ताव तयार बनाएको विकल्प प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यातायात र यति मा। एन खोज
को "मेट्रिक्स" मा खण्डहरूमा उपस्थिति - यो एक जरूरी छ। विज्ञापन अभियान, परिणाम मा ध्यान, धेरै अवस्था संयोजन, लक्षित र खण्ड हुनु पर्छ।
विज्ञापन अभियान र retargeting लागि एक विज्ञापन
अब लक्ष्य र खण्डहरूमा गठन गरिएका, यो एक विज्ञापन अभियान सिर्जना गर्न आवश्यक छ। यो गर्न, "Yandex" खण्डमा जानुहोस्।
यहाँ, काम पहिले नै सिर्जना अभियान, वा रूपबाट नयाँ संग बढ्नु छ। सिर्जना र पहिलो विज्ञापन अभियान कन्फिगर - अर्को कथा छ। यस लेखमा हामी "Yandex" मा एक retargeting रूपमा एक यस्तो साधन बारेमा कुरा गर्दै छन् किनभने यो मुद्दा, स्वतन्त्र पत्ता लगाउनुहोस्।
पूर्व-बनाएको विज्ञापन कसरी स्थापित गर्ने? अभियान ", साइटहरु विभिन्न प्रकारका लागि स्वतन्त्र नियन्त्रण" एक रणनीति हिट रोज्नुपर्छ त र खोज साइटहरूमा प्रदर्शन असक्षम यो प्रविधि, मात्र यान लागू हुन्छ।
थप सिर्जना विज्ञापन। कुनै सख्त नियम हो, पाठ, लिंक र तस्बिरहरू प्रयोग गर्दछ। को आगन्तुक गरेको ध्यान आकर्षित गर्नेछ, विज्ञापन लेख्न र एक रोचक तस्वीर थप्न शीर्षक छान्नुहोस्।
अवस्था retargeting थप्दै
यो सफलता बाटोमा महत्त्वपूर्ण कदम punkt-। यसको सेटिङ तल नै खण्ड छ। पूर्वनिर्धारित यो "थप्नुहोस्" बटन थिच्न आवश्यक छ, सेट छैन।
समूह को अवस्था ( "Yandex" retargeting मा) - यो के हो र कसरी तिनीहरूलाई चयन गर्न: पहिलो, हामी प्रश्नको जवाफ?
समूह predetermined अवस्था मध्ये धेरै मापदण्डहरु र लक्ष्य खण्डहरूमा संयोजन। तिनीहरूले एक सत्र साइट भ्रमण मा प्रयोगकर्ता समूह वातावरण को कार्यान्वयन लागि तीन समूह विभाजित हो:
कम्तिमा एक - यो प्रयोगकर्ता खण्ड मारा छ कि, वा एकल सत्रमा लक्ष्य पुग्न हो।
गरे सबै - को आगन्तुक दिइएको खण्ड पर्छ र यसरी (उदाहरणका लागि, 35-40 वर्ष को एक मानिस क्रम गरे) विशिष्ट उद्देश्य पुगेको छ।
ग्राहक एक खण्ड प्रवेश गर्नुभयो र कुनै पनि उद्देश्य पूरा भएन - एक पूरा गरिएको छैन।
एक समूह सेटिङ चयन र लक्षित खण्डहरूमा थप्नुहोस्।
अर्को चरण लक्ष्य प्राप्त गर्न को अवधि सेट छ। सबै भन्दा राम्रो विकल्प 10 20 दिनको अवधिका हुन मानिन्छ। यो विज्ञापन मात्र 10-20 दिनको लागि लक्ष्य, हालका थप परिणाम (महिना, दुई, तीन वर्ष पहिले) गणना गरिने छैन पुग्यो गर्ने पर्यटकहरूलाई देखाइने भनेर बाहिर जान्छ।
अन्तिम चरण - दर
तपाईं उच्च बोली सेट गर्न सक्नुहुन्छ, तर कम यान, पहिले नै विज्ञापन retargeting "न्यानो" मा आइपुग्दा जो ग्राहकहरु। मूल्य बजेट, गतिविधिहरू, दर्शक कवरेज र यति मा निर्भर गर्दछ। प्रति-क्लिक गर्नुहोस्, तपाईं गर्न सक्छन् सेट रूपमा विशिष्ट सल्लाह दिनुहोस्।
आफ्नो बोली सेट र सेटिङ बचत गर्नुहोस्। अब तपाईं निडर भई कि retargeting को "Yandex" मा उत्पादन भन्न सकिन्छ। सेटिङ पूरा भएको छ।
एक प्रविधिको तपाईं, "भेट्टाउने" गर्न दर्जा एक कार्य तिनीहरूलाई उत्प्रेरणा दिन्छ - "Yandex" मा Retargeting। अनलाइन पसलहरूमा लागि यो ग्राहक क्रम जारी एक निवेदन र जस्तै सिर्जना गर्न आवश्यक छ अवतरण लागि भुक्तानी गरेको छ कि महत्त्वपूर्ण छ।
"Yandeks.Metrike" सबैभन्दा उपयुक्त दर्शक सम्बोधन गर्न मद्दत गर्न सही तरिकाले कन्फिगर लक्ष्य र खण्डहरूमा, को शो "चिसो" ग्राहकहरु पैसा बचत।
विशेष गरी सबै हालतमा बिक्री र आवेदन लागि लड्न गर्नेहरूका लागि सिफारिस गरिएको। ठीक आएको retargeting अवस्था, 30%, साथै privlekaeyut नयाँ ग्राहकहरु गर्न साइटको रूपान्तरण वृद्धि ब्रान्ड थप चिन्न बनाउन। एक तर कि उदीयमान निरन्तर विज्ञापन हाम्रो बारे भूल छैन छैन सहमत गर्न सक्नुहुन्छ।
विशेषज्ञहरु को मद्दत बिना सामग्री राखन
एकै समयमा विज्ञापनदाता र प्रकाशक
कस्तो सानो ट्युमर छ र कसरी यो खतरनाक छ।
धातु Tempering। वर्तमान प्राचीन देखि विधिहरू
Neurosis - नतिजा को संकेत को लक्षण
च्याउ क्लाउड - यो विस्फोट को sinister प्रतीक
अष्ट्रेलिया, क्वीन्सल्याण्ड: वर्णन, चासो ठाउँहरू, प्रशासनिक केन्द्र